Xirfad Dhaqaajiye / trailer Nooca Soo Saaraha Diesel Generator Si Toos Ah | Sidaada
Qalabka koronto-dhaliyaha ee nooca trailerku wuxuu u qaybsami karaa gacan-ku-dhejiye gawaarida gawaarida lagu rakibay, matoor saddex-jibaar ah, afar matoor koronto-dhaliye ah, saldhigga korontada, Gawaarida korantada, Saldhigga korantada ee buuqa yar-yar, Saldhigga korantada weelka mobilada, koronto gaariga injineernimada, iwm.
Jiididda: korsado jillaab dhaqaajin kara, 180 ° u leexan kara, isteerinka dabacsan, hubi nabadgelyada wadista.
Xayiraadda: Waxaa jira is-qabsiga bareega hawada iyo nidaamka bareegga gacanta lagu shaqeeyo si loo hubiyo amniga inta lagu jiro gaariga.
1. Waxqabad hooseeya oo muhiim ah, xadka jabaqda koronto dhaliyaha 75dB (A) (1m meel un ka fog unugga).
2. Qaabka guud ee cutubku waa iswaafajisan yahay qaab dhismeedkiisa, muggiisuna yaryahay, ugub iyo qaab qurux badan
3. Difaaca lakabyada isku-dhafan ee isku-dheelitir la'aanta daboolka daboolka.
4. Nooca yareynta dhawaqa ee qaadashada kanaalka badan iyo qiiqa, marinada iyo hawo-mareenada hawada, si loo hubiyo waxqabadka ku filan ee cutubka.
5. Aamusnaanta weyn ee aamusnaanta isku dhafan.
6. Awood shidaal gubis leh oo awood badan leh.
7. Saxan gaar ah oo furitaan dhaqso leh oo dayactir fudud ah.
"Ha shaqeynin" ama calaamado digniin ah oo la mid ah waa in laga sudhaa furaha bilowga ama kabaalka ka hor dayactirka ama dayactirka koronto-dhaliye.
Ha u oggolaan shaqaalaha aan idman meel u dhow mishiinka inta matoorka la dhigayo la dayactirayo ama la dayactirayo.
Riix batoonka joojinta degdegga ah ee koontaroolka koronto-dhaliyaha, iyo beddelka soo-saaraha koronto-dhaliyuhu waa inuu ahaadaa meesha OFF (OFF).
Marka loo eego shuruudaha xaaladaha shaqada, marka la gelayo goobta lagu dhejinayo matoor-dhaliye, koofiyadda amniga waa in la xidho, indhaha ilaaliya iyo qalabka kale ee difaaca waa in la xidho marka loo baahdo.
Xidho difaac dhegta haddii aad mashiinka ku wadato meel xiran si looga hortago waxyeelo soo gaadha maqalka. Ha xidhnayn dharka iyo dharka dahabka ah ee ka ilaalinaya goobta shaqada, kuwaas oo ku xidhan kara joystick-ka ama qaybaha kale ee mishiinka.
Hubso in dhammaan gaashaammada ama daboolka ay ku dhegan yihiin mishiinka. Ka taxaddar markaad isticmaaleyso dhammaan wakiilada nadaafadda. Ha ku keydin xalalka dayactirka weelka dhalada, maadaama weelasha dhalooyinka ay u nugul yihiin waxyeello.
Marka mid ka mid ah xaaladaha soo socda ay dhacdo, waqtiga lacag bixinta waxaa loo oggol yahay in si habboon loo dheereeyo:
(1) waqtiga keydinta batteriga waa in ka badan 3 bilood, waqtiga amraya wuxuu noqon karaa 8 saacadood; (2) heerkulka cimilada wuxuu soconayaa in ka badan 30 ° c (86 ° F) ama qoyaanka qaraabada ah wuxuu socdaa in ka badan 80%, waqtiga amrayana waa 8 saacadood.
(3) Haddii waqtiga keydinta bateriga uu ka badan yahay 1 sano, waqtiga amraya wuxuu noqon karaa 12 saacadood.
(4) Dhamaadka xariiqda lacag bixinta, hubi in heerka dareeraha elektroolka uu kugu filan yahay, kuna dar elektroolka caadiga ah culeyska gaarka ah ee saxda ah (1: 1.28) markii loo baahdo.
Markaad buuxinayso batteriga, marka hore fur furka miiraha ama daboolka marinka batteriga, oo hubi heerka korantada, oo ku hagaaji biyo qulqulaya marka loo baahdo. in lagaa saaro waqtiga si looga fogaado uumiga dhibcaha biyaha gudaha darbiga sare ee unug, waa in fiiro gaar ah loo yeesho in la furo hawo qaas ah si loo fududeeyo wareegga saxda ah ee hawada.
Hore: 5kw alwaax dhaliyaha alxanka ayaa dhigay
Xiga: 15kva-500kva Dajisaa Generator Gaaska Dabiiciga / Aamusan
Dhaqdhaqaaqa / trailer Nooca Diesel Generator
Awoodda Awoodda 10KVA-500KVA
Danab 220 / 380V, 230 / 400V, 110 / 220V, 240 / 415V, 254 / 440V, 277 / 480V
Mashiinka oo leh Cummins, Perkins, Doosan, Wandi, Kubota, Yanmar, Isuzu, iwm.
Beddelaha Leroy somer, Stamford, Marathon, iwm.
Maamulaha Deepsea, Komap, Smartgen, iwm.
Wareegga Wareegga ABB / SCHNEIDER, iwm.
Nooca Furan / Aamusnaan
Haanta Shidaalka Taangiga ugu sarreeya, Taangiga Saldhigga, Haamaha Shidaalka ee Maalinlaha ah ee Dibadda
Alaabada ikhtiyaari ikhtiyaari ah Nooca Dhaqdhaqaaqa / Trailer Noolaha Generator / Nidaam iswaafajinta Nidaamka Bedelka otomaatiga ah
Baaxadda Qalabka Generator
1. Mashiinka: Mashiin nooc cusub ah.
2. Beddelaha: Calaamadeeye beddel buraash cusub, hal dhal, IP23, fasalka dahaadhka H.
3. Saldhiga aasaasiga ah: Mashiinka culus ee saldhigga kanaalka birta ah.
4. hiitarka: Ilaalada amniga.
5. gariirka Damper Dareemida gariirka inta udhaxeysa Mashiinka / Beddelaha iyo salka jir
6. Burbur: 3-cirifka wax soo saarka wareegga wareegga gacanta sida caadiga ah, 4 ulaha xulashada
7. maamusha: Moodooyinka Deepsea, Komap ama Smartgen, iwm.
8. Aamus: Aamusnaanta nooca warshadaha ee culus oo leh hoos u rogrogmada, xusulka.
9. Batariga: Varta Brand, karti sare oo daboolan baytari bilaash ah fiilooyinka batteriga c / w.
10. Haanta Shidaalka: 8 saacadood salka shidaalka ama la habeeyay
11. Qalabka Qalabka & Buugta: Xirmooyinka qalabka caadiga ah iyo hawlgalka / dayactirka / buugaagta dhameystiran ee Generator / Engine / Beddelaha / guddiga xakamaynta, iwm.